Tari-dalana momba ny fahasalamana CDC: Tsy dia tsara loatra ho an'ny Carnival Cruise Line
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Tari-dalana momba ny fahasalamana CDC: Tsy dia tsara loatra ho an'ny Carnival Cruise Line
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao
Namaky 25 aho
Ankafizo ny Fetiben'ny Cruise Cruise. Milamina. ny protokolola sy ny fomba fanao dia novolavolaina niaraka tamin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana. Natao hahomby sy azo ovaovana izy ireo rehefa mivoatra ny toe-pahasalamam-bahoaka ankehitriny.
Mandra-pahatongan'ny fampandrenesana misimisy kokoa, ny hetsika rehetra an'ny Karnavaly dia hahatratra ity fenitra ity, mba hahafahan'ny sambo fitaterana an-tsambo hamerina amin'ny laoniny ny asany sy hitazomana ny fahatokisana ireo toerana hitsidihany sy hatolotr'izy ireo amin'ny diany sy ny traikefa an-dry zareo vahiny.
Carnival Cruise Line no sambo fitsangantsanganana voalohany niondrana an-tsambo avy tany Port of Baltimore hatramin'ny fijanonan'ny indostrialy niasa.
Niainga androany i Carnival Pride tamin'ny sambo fitetezana fito andro mankany The Bahamas, mitsidika ireo toerana malaza any Nassau, Freeport ary ny nosy tsy miankina Half Moon Cay.
Talohan'ny fiaingany dia nisy hetsika "Back to Fun" natao tao amin'ny terminal izay nandraisan'ny filoham-pirenena karnavaly Christine Duffy, ny kapitenin'ny avonavona karnavaly Maurizio Ruggiero ary ny talen'ny Executive of the Portim of Baltimore William P. Doyle ny lanonana fankalazana ary noraisin'izy ireo tamin'ny fomba ofisialy ireo vahiny voalohany tao anaty sambo. .
"Faly izahay fa tafaverina any Baltimore, manome ny vahininay fialan-tsasatra fialam-boly nandrasan'izy ireo tamim-paharetana nefa koa manohana ny toekarena eo an-toerana ary manome ny mpiasanay ekipa hanohana ny fianakaviany any an-trano," hoy i Christine Duffy , filohan'ny Carnival Cruise Line. "Baltimore dia mpiara-miasa mahafinaritra nandritra ny folo taona mahery ary faly izahay miverina amin'ny Fialam-boly amin'ity tsena lehibe ity izay manasa vahiny an'aliny maro any Avaratra Atsinanana sy manamorona ny Atlantika."
“Andro mahafinaritra ho an'ny seranan'i Baltimore!” hoy ny talen'ny Executive Port of Baltimore William P. Doyle. “Efa ela no niandrasanay ny fandraisana ilay Carnival Pride ho any Charm City. Mahatsiravina ny fitsangantsanganana an-dranomasina any Baltimore - ny terminal fiantsonanay dia mivoaka avy hatrany amin'ny Interstate 95 ary 15 kilometatra sisa no misy ny seranam-piaramanidina BWI Thurgood Marshall. Ny tobin'ny fitsangantsanganana an-tsambo dia mipetraka eo anilan'ny Inner Harbor malaza an'i Baltimore, ary koa ny Federal Hill, Fort McHenry, ary Fells Point. Misy safidy fitsangatsanganana sy fisakafoanana ary fiantsenana be dia be. Koa fitsangantsanganana an-tsambo avy any Baltimore, mankafiza ny tananantsika lehibe, ary mandehana mankamin'ny paradisa tropikaly tsy mampino indrindra eto an-tany. ”
Carnival Cruise Line dia nandefa ny programa fitsangantsanganana an-taonany voalohany avy any Baltimore tamin'ny taona 2009 ary nanomboka teo dia nitondra vahiny iray tapitrisa mahery, ka nahatonga an'i Carnival ho mpiantsambo mpitsangantsangana voalohany avy ao amin'ny seranana.
Amin'ny volana novambra, sambo vaovao, Carnival Legend, no hisolo ny Carnival Pride any Baltimore rehefa miova hiaingan'i Tampa i Carnival Pride.
Carnival dia manome ny safidy fitsangantsanganana an-tsokosoko betsaka indrindra avy any Baltimore, ao anatin'izany:
Sambo enina sy fito andro mankany Bermuda sy The Bahamas
Fitsangatsanganana valo andro any Canada / New England ary Karaiba
Fitsangatsanganana an-tsambo 14 andro mankany amin'ny Lakandranon'i Panama sy any atsimon'i Karaiba atsimo.
Fitsangatsanganana an-tsambo an-dranomasina tao amin'ny Carnival Legend tamin'ny volana martsa 2022 niaraka tamina hetsika sy fialamboly manokana an-tsambo niaraka tamin'i Carnival Cruise Line's 50th Fetin'ny fankalazana.
Mihoatra ny tolo-kevitry ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina ny kaontim-pikatrohana an'i Carnival.
Ny karnavaly dia hanohy hiasa sambo fitsangantsanganana vita vaksinina araka ny famaritan'ny CDC, ao anatin'izany ny fanaovana vaksiny feno ny ekipazy rehetra.
Amin'ny fitandremana sy valiny amin'ny fitomboan'ny isan'ny tranga COVID-19 any Etazonia ateraky ny Delta variant, dia nanavao ireo kaonty sy ny fepetra takiana momba ny fitsapana mialoha ny fitsangantsanganana an-tsambo ho an'ny vahiny vakisiny feno sy ny politikan'ny saron-tava.
Manantena i Carnival fa hiasa vonjimaika ireo fepetra ireo ary hanitsy ny fomban-kevitray miorina amin'ny torohevitra avy amin'ny mpanolo-tsaina ara-pahasalamana sy ny fahasalamam-bahoaka.
Ireto misy fepetra noraisina sy nampitan'ny Carnival Cruise Line
Ny mpitsidika rehetra dia tokony handinika am-pitandremana mialoha ny famandrihana mialoha sy ny toro-hevitra momba ny fahasalamana mialoha ny dia amin'ny tranokalanay sy Tranonkala Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) .
INFORMATION PRE-BOARDING: Mba hitantanana ny fandehanan-tsinay vita vaksiny, tena zava-dehibe ho an'ny mpitsidika rehetra ny mijery mailaka fanamarinana mialoha ny fizahan-tany momba ny vaksinina izay mila fenoina ho an'ny olona rehetra amin'ny famandrihana. Angatahina ny vahiny hanavao ny mombamomba azy ireo ao amin'ny Carnival.com miaraka amin'ny mombamomba azy ireo ankehitriny satria hifampiresaka amin'ny alàlan'ny mailaka maromaro izahay. Azafady mba vakio ny taratasinay rehetra ary fenoy ny fangatahana rehetra hahazoana fampahalalana mialoha ny fiainganana. Ny tsy fanarahana ny fangatahana fampahalalana mialoha ny fitsangantsanganana an-tsambo dia hiteraka fanafoanana.
STANDARSA VACCINATION & TESTING
Vahiny vaksiny feno
Misy ny fitsangantsanganana vaksinina ho an'ireo vahiny izay nahazo ny fatra farany tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 nahazo fankatoavana farafaharatsiny 14 andro talohan'ny andro fitaterana ary manana porofon'ny fanaovana vaksiny.
Ho an'ny fitsangantsanganana an-tsambo manomboka amin'ny 12 septambra 2021, ny vaksiny feno vaksiny dia tsy maintsy mampiseho ihany koa ny vokatra ratsy amin'ny fitsapana COVID-19 (PCR na antigen) nalaina tao anatin'ny telo andro talohan'ny niandohan'ny sambo. Ohatra, raha amin'ny sabotsy ny sambo dia azo atao isaky ny alarobia ka hatramin'ny zoma ny fitsapana. Ny mpitsidika koa dia mety handray ny fitsapana amin'ny marainan'ny fidirana raha mbola azo antoka fa hahazo ny valim-panadinana alohan'ny fotoana fisavana azy ireo.
Mahomby amin'ny sambo hatramin'ny 13 septambra 2021, ny CDC dia mitaky fitiliana mialoha ny fitsangantsanganana natao ho an'ny vahiny vita vaksiny hatao ao anatin'ny roa andro alohan'ny datin'ny sambo. Raha amin'ny sabotsy ny sambo dia azo atao ny alakamisy sy zoma ary hatramin'ny sabotsy dia azo antoka fa handray ny valiny amin'ny fotoana anaovana fisavana.
Ny porofon'ny vaksiny, toy izao, dia takiana amin'ny terminal alohan'ny hidirany:
Rakitra fanaovam-baksiny tany am-boalohany navoakan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana eto amin'ny firenena nitantana ny vaksiny (izany hoe ny karatra firaketana vaksinin'ny CDC amerikana). Tsy ekena ny kopia na ny sary.
Taratasy fanamarihana COVID-19 nomerika (kaody QR azo ekena), firaketana vaksinin'ny COVID-19 avy amina mpitsabo iray (ekena ny mailaka niomerika tany am-boalohany), ny firaketana ara-pahasalamana elektronika manokana na ny firaketana ny rafi-kery momba ny tsimatimanota ao amin'ny governemanta dia ekena ihany koa.
Ny anarana sy daty nahaterahana ao amin'ny firaketana ny vaksiny dia tokony hifanaraka amin'ny taratasim-panafaran'ny vahiny ary asehoy fa vaksiny feno ny vahininy. Ny daty fanaovana vaksiny dia tokony hanondro fa nahavita ny fatra takiana ny vahiny aorian'ny 14 andro alohan'ny datin'ny sambo. Midika izany fa amin'ny andro fidirana dia 15 andro no lasa hatramin'ny nandraisana ny doka farany. Ny karazana vaksinina, daty nitantanana ary isa maro dia tsy maintsy hita miharihary.
Amporisihinay ny vahiny mba hanana ny mombamomba ny fifandraisana (mailaka sy telefaona) misy eo no ho eo avy amin'ny tobim-pahasalamana na tranokala fitsaboana izay namoaka ny taratasy fanamarinana, mba hanamarinana ny vaksiny raha ilaina izany. Azo ampiasaina ihany koa ny toerana fisoratana anarana fanaovana vaksiny.
Entanina mafy ny vahiny hamerina hijery ny firaketana momba ny vaksiny ary hiantoka ny fanarahan'izy ireo ny fenitra misy azy ireo, ary koa hanana porofon'ny valim-panadinana COVID-19 ratsy, talohan'ny nandehanana nankany amin'ny terminal fitsangantsanganana mba hisorohana ny toe-javatra izay mety tsy hahafahan'izy ireo mitsangantsangana na mahazoa famerenam-bola.
Ho an'ny fitsangantsanganana an-tsambo miala any Etazonia, ny CDC dia mitaky vaksinina roa ao anaty andiana 2-doka mba hitovy karazana. Manaiky ny vaksinin'ny mRNA ihany koa izy ireo (Pfizer sy Moderna). Tsy misy fitambaran-divay hafa mahafeno ny mason-tsivana horaisina ho vaksiny feno. Ohatra, ireo vahiny kanadiana na iraisampirenena izay nahazo fitambarana AstraZeneca sy Pfizer dia heverina fa tsy nofefan'ny CDC. Ireo vahiny izay tsy vita vaksiny feno, araka ireo mason-tsivana ireo, dia horaisina ho tsy vita vaksiny ary mila mangataka fanavotana amin'ny fanaovam-baksiny.
Vahiny tsy vita amin'ny vinaingitra - Fanafahana amin'ny fenitra fanaovana vaksiny
Ny fepetra takiana amin'ny sambo fitsangantsanganana mba hiditra amin'ny seranana ivelan'i Etazonia dia manohy mivoatra ary ny Carnival Cruise Line dia tsy maintsy miasa mifanaraka tanteraka amin'ireo fitsipika ireo. Ny famoahana vaksinina ho an'ny fitsangantsanganana any Karaiba dia voafetra ho an'ny ankizy kely latsaky ny 12 taona, ary ny tanora sy ny olon-dehibe manana aretina izay afaka manome fanamafisana an-tsoratra avy amin'ny mpitsabo azy ireo fa tsy afaka vaksiny izy ireo noho ny antony ara-pitsaboana. Ny fandehananay avy any Florida, Texas, Louisiana, ary Maryland dia hiasa eo ambanin'ireto fepetra ireto mandra-pahatongan'ny 31 desambra 2021 miaraka amin'ny fiheverana fa ny fameperana misy ankehitriny sy mivoatra apetraky ny toerana dia hijanona eo amin'ny toerany.
Ny fanavotana vaksiny ho an'ny sambo miainga avy any Long Beach, California dia mbola horaisina ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona ary araka ny takian'ny lalànan'ny federaly amerikana (amin'ny toeran'ny antony ara-pitsaboana ary mitazona ny finoana ara-pinoana marina).
Ao amin'ny Carnival Miracle® avy any Seattle; Carnival Pride® 31 Oktobra 2021 avy any Baltimore; Carnival Glory® 28 Novambra 2021 avy any New Orleans; ary Carnival Miracle® 28 Novambra 2021 avy any Long Beach, ny fanavotana vaksinina dia horaisina araka izay takian'ny lalàna.
Ny fanavotana zaza sy olon-dehibe dia tsy azo antoka ary voafehin'ny fahaiza-manao arakaraka ny isan'ny vaksinin'ny vaksiny vinavinaina ho ao an-tsambo. Ireo vahiny tsy vita volo nahazo fanavotana dia tokony hanaja ny fepetra takiana sy ny protokolola sasany, izay misy:
Fanolorana fanandramana PCR COVID-19 ratsy amin'ny fisavana, natao teo anelanelan'ny 72 sy 24 ora talohan'ny datin'ny sambo (ohatra, raha amin'ny sabotsy ny sambo, dia azo atao isaky ny alarobia ka hatramin'ny zoma ny fitsapana, fa tsy amin'ny ny marainan'ny fanombohana). Ny vahiny tsy vita volo dia tsy maintsy manao fanadinana antigy fanampiny amin'ny fiatombohany, ary manandrama indray ao anatin'ny 24 ora fihenam-bidy amin'ny sambo rehetra lava kokoa noho ny 4 andro. 150 dolara amerikana isaky ny olona no hojerena ao amin'ny kaonty Sail sy Sign an'ny vahiny handoavana ny vidin'ny fitiliana, ny fanaovana tatitra ary ny fizahana ara-pahasalamana sy fiarovana. Ny zaza latsaky ny roa taona dia tsy mahazo fepetra takiana amin'ny fitiliana.
Fepetra fiantohana fitsangantsanganana - Sambo any Florida sy Texas
Ireo vahiny tsy vita volo dia miondrana amin'ny sambo miainga avy any Florida na Texas dia tsy maintsy mampiseho porofon'ny fiantohana fiantohana mandritra ny fizahana. (Jereo ny fizarana etsy ambany raha mila tsipiriany feno momba ny fiantohana fitsangatsanganana.)
Fanamarihan'ny dokotera - Sambo any Florida, Texas, Louisiana ary Maryland
Raha nahazo fanavotana amin'ny vaksiny ianao noho ny antony ara-pahasalamana, dia tsy maintsy aseho mandritra ny fisavana ny taratasy avy amin'ny mpitsabo iray milaza ny mpitsidika fa tsy azo vaksina noho ny antony ara-pitsaboana.
Fitsidihana sy fitsangatsanganana an-tanety
Ny vahiny tsy vita volo dia tsy afaka miakatra irery any amin'ny seranan-tsambo. Ny mpitsidika dia tsy afaka miantso afa-tsy amin'ny seranan-tsambo antso raha toa ka voatondrona amin'ny fitsangatsanganana feon-kiraro notohanan'ny Karnavaly.
Ny fitsangatsanganana manjavozavo nankatoavin'ny karnaval dia fitsangantsanganana izay miasa ao anaty tontolo voafehy. Ny vahiny dia halefa avy any amin'ny sambo mankany amin'ny fitsangatsanganana ataon'izy ireo ary hiverina any amin'ny sambo avy hatrany rehefa miverina avy amin'ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina. Tsy azo ajanona ny fijanonana tsy voalamina (izany hoe fivarotana fanomezana, bara, trano fisakafoanana sns.).
Raha misafidy ny tsy hividy fitsidihana bubble ianao, dia lany ny fitsidihana bubble, na nofoanana noho ny toetr'andro, ireo vahiny tsy voamarina dia tsy maintsy mijanona ao anaty sambo.
Ny vahiny mandray anjara amin'ny fitsidihana miboiboika, na inona na inona satan'ny fanaovana vaksiny, dia tsy maintsy manaraka ny protokolan'ny fizahan-tany rehetra sy ny fitarihana eo an-toerana momba ny fanandramana / fisavana, fanaovana sarontava, fanalavirana ara-batana, sns. mitsidika. Ohatra, mifototra amin'ny fifanarahana nataontsika tamin'i San Juan, ireo vahiny tsy voadinika dia tsy maintsy mijanona ao anaty sambo mandritra ny fitsidihanay any.
Ny vahiny izay tsy manaraka ny tontolo voafehin'ny fitsidihana bokotra dia esorina amin'ny fitsidihana.
Raha mitsidika seranana fiantsoana manokana toy ny Half Moon Cay sy Princess Cays ny sambo fitsangantsangananao, dia mety hidina irery any an-tanety na hividy fitsidihanay ireo vahiny tsy vita volo.
Miangavy anao izahay Miverina amin'ny FAQ momba ny serivisy ho an'ny lisitra feno momba ny kaonty sy ny fepetra takianay, izay manohy mivoatra ary mety miova tsy misy fampandrenesana mialoha.
Ny fangatahana famotsoran-keloka tantanin'ny fahaiza-manao dia tokony halefa ao anatin'ny 48 ora aorian'ny famandrihana vaovao. Hodinihina ny fangatahana aorian'ny fandoavam-bola feno, amin'ny filaharan'ny daty fandefasana, ary rehefa vitanay ny fanisana natao ho an'ny vaksiny voaisa.
Raha vahiny tsy voamarina ianao dia tsy ho voamarina ny famandrihanao raha tsy mahazo fanavotana ankatoavina ianao, izay havoaka ao anatin'ny 14 andro aorian'ny sambo. Izay vahiny tsy voamarina fa nekena ny fanavahana dia takiana izy ireo handinika sy hanaiky ny fetra rehetra sy ny fomba fanao voatanisa etsy ambony alohan'ny hidiran'ny sambo.
Raha tsy afaka mankato ny fangatahana izahay dia manan-tsafidy hanafoana ireo vahiny tsy voahidy avy amin'ny famandrihana ny vahiny, mifindra amin'ny daty fandosirana ho avy na manafoana miaraka amin'ny famerenam-bola feno amin'ny endrika fandoavam-bola tany am-boalohany. Mampalahelo fa tsy afaka manampy amin'ny fandaniana mifandraika amin'ny fangatahana fanaingoana nolavina izahay, ary ny vahiny dia miatrika ny risika rehetra mifandraika amin'ny vidin'ny dia tsy azo averina (izany hoe ny saran-dalan'ny rivotra, hotely).
Fantatsika fa ireo vahiny tsy voadinika dia hiatrika fameperana vonjimaika mandritra ny dingana voalohan'ny hamerenantsika azy, miaraka amin'ny sarany fanampiny amin'ny fitiliana sy fiantohana ary manantena izahay fa ireo fotopoto-pitsipika ireo dia hitohy handroso rehefa mandeha ny fotoana.
Ny vahiny rehetra miverina amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo, na inona na inona satan'ny fanaovana vaksiny, dia mila andrana eo anelanelan'ny dia.
Fepetra takiana amin'ny fitsangatsanganana ho an'ny olona tsy voahitsy - FLORIDA & TEXAS BASED SHIPS *
Ireo vahiny tsy vita volo dia miondrana amin'ny sambo miainga avy any Florida na Texas dia tsy maintsy mampiseho porofon'ny fiantohana fiantohana fitsangantsanganana mandritra ny fisavana. Io fepetra io dia avela ankehitriny ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona izay tsy mahafeno fepetra amin'ny vaksinina. Na izany aza, ampandrenesina ny ray aman-dreny fa ny fividianana fiantohana dia lavitra ho an'ny zanany.
Fepetra takiana amin'ny politika: farafahakeliny US $ 10,000, isan'olona, ​​amin'ny fandrakofana momba ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny fandrakofana US $ 30,000 ho an'ny famindra toerana vonjy taitra ary tsy misy fanilihana COVID-19.
Ny politikam-piantohana dia tsy maintsy manonona ny vahiny tsy voamarina ho tompon'antoka politika na mpandray tombony ary azo vidiana amin'ny orinasam-piantohana fitsangatsanganana nofidian'ny vahiny na amin'ny alàlan'ny Carnival Vacation Protection, izay misy ny takiana takiana.
Ny Carnival Vacation Protection dia azo vidiana mandra-pahatongan'ny 14 andro alohan'ny fivezivezena ho an'ireo vahiny monina any Etazonia (tsy manilika an'i New York sy Puerto Rico), Canada (tsy manilika an'i Quebec), US Virgin Islands (St. Thomas, St. John ary St. Croix) sy Samoa Amerikanina. (Fanamarihana: ny famandrihanao dia tsy maintsy aloa amin'ny vola amerikana.) Raha te hividy fiarovana amin'ny karnavaly karnavaly ianao dia miantso ny 1-800-CARNIVAL, ny Planner momba ny fialan-tsasatrao manokana, na ny mpanolotsaina momba ny dia.
Ireo vahiny tsy vita volo tsy misy porofo fiantohana takiana dia tsy avela handeha ary tsy hisy famerenam-bola omena.
* Miorina amin'ny fepetra takiana amin'ny toerana sasany. Ny seranan-tsambo sasany izay alehantsika dia ampiasain'ny orinasa mifampitohy karnavaly eo ambany faneken'ny governemanta na fahazoan-dàlana.
Ny mpitsidika rehetra dia angatahina hamita ny fangatahana fahasalamana an-tserasera mandritra ny 72 ora alohan'ny fandehanana an-tsambo sy fizahana fahasalamana mialoha ny fanombohana, izay hisy ny fanamafisana ny valin'ny fizahana ny fahasalamany, ny fanamarinana ny antontan-taratasy vaksininy ary ny fitiliana COVID-19 ilaina.
Hanondro an'izay olona manana fambara sy soritr'aretin'ny COVID-19 izahay, na izay voamarina fa tandindomin-doza, ho an'ny fizaham-pahasalamana fanampiny alohan'ny hamelana azy ireo hiditra. Ireo mpitsidika dia ho hitan'ny mpiasan'ny fitsaboana anay ary ekena araka ny fahaizan'izy ireo misafidy. Ny fanaraha-maso faharoa (sy ny fizahana fahasalamana mandritra ny fitsangantsanganana an-tsambo) dia hatao rehefa ilaina izany.
Izay vahiny manaporofo fa tsara amin'ny fiandohany, sy ireo mpiara-dia aminy ao amin'ny stateroom iray ihany, miaraka amin'ireo olona akaiky azy, dia tsy afaka mitsangantsangana ary homena cruise cruise ho avy. (Ny fifandraisana akaiky dia ny olona rehetra izay teo amin'ny 6 metatra an'ny olona iray voan'ny aretina / simptomika nandritra ny 15 minitra na mihoatra ny fe-potoana 24 ora tao anatin'ny 14 andro talohan'ny sambo.)
Ny politikan'ny Carnival Cruise Line dia ny tsy maintsy hanaovana vaksiny ny olona rehetra, miaraka amin'ireo fanitsakitsahana kely dia kely ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona sy ireo tsy afaka vaksiny. Ity fomba ity dia mihoatra ny fepetra takiana amin'ny fitsangantsanganana vita vaksiny eo ambany fitarihan'ny CDC, ary mahafeno ny fepetra napetrak'ireo toeran-tsambo alehantsika amin'ireto sambo fitsangantsanganana ireto.
Ho fanampin'ny fitsangantsanganana vaksinim-borona dia nametraka andian-tsarimihetsika feno izahay ho ampahany amin'ny fanombohana indray, miaraka amin'ny tombontsoan'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahininay, ny ekipa ary ny toerana itodianay laharam-pahamehana. Noho ny tranga trangana COVID-19 nitranga manerana ny firenena tamin'ireo izay nanao vaksiny dia nitarina ny fepetra takiana amin'ny fitsapana mialoha ny fitsangantsanganana mba hampidirana ireo vahiny REHETRA. Izahay koa dia nanitatra ny takiana amin'ny saron-tava izay mitaky ny hisaron-tava ny vahiny ao an-trano amin'ny toerana sy toerana malalaka kokoa misy olona mivory.
Na dia misy aza ireo kaonty ireo dia mety misy tranga COVID-19 tsara mandritra ny diany. Ny sambonay dia manana tobim-pahasalamana miaraka amin'ny fahafaha-manao diagnostika sy fitiliana ary fitaovana amin'ny fanarahana fifandraisana. Vaksiny feno ny ekipanay ary manao sarontava ao anaty trano amin'ny fotoana rehetra. Raha jerena ny kaodinay, ny tranga tsara dia ambany lavitra noho izay iainan'ny vondrom-piarahamonina amoron-dranomasina. Na izany aza, noho ny Delta variant dia miteraka fiakaran'ny tranga eo amin'ireo vahoaka vita vaksiny, zava-dehibe ny hahafantaranao ireto fampahalalana manaraka ireto:
Raha sendra mifanerasera akaiky na miharihary amin'ireo vahiny na mpikambana ao amin'ny ekipa izay mitsabo ny COVID-19 ireo vahiny na mampiseho soritr'aretina amin'ny aretina toy ny COVID mandritra ny dia an-tsambo dia takiana izy ireo sy ireo olona akaiky azy ireo handia fanampiny fanandramana ary mety takiana hanan-kery ao amin'ny efitranony mandra-pahatongan'ny ekipa mpitsabo anay fa azo antoka ny hanohizan'izy ireo ny asa fitetezam-paritany.
Raha nanao dia an-tsambo ny vahiny mba hanatevin-daharana ny sambo fitsangantsanganana ary hizaha toetra tsara rehefa miakatra izy ireo ary tsy afaka mitsangantsangana - na hizaha toetra tsara mandritra ny fitsangantsanganana an-dranomasina - izy ireo sy ireo olona akaiky azy ireo dia mety hasaina hotazomina alohan'ny hamonjy fodiana.
Ireo vahiny karohina amin'ny sambo dia hahazo crédit de cruise ho avy pro-naoty mitovy amin'ny isan'ny andro ao amin'ny quarantine.
Ho an'ireo vahiny izay tsy maintsy manakaramaina eo an-toerana, dia hanampy amin'ny fandaminana ny quarantine ny Carnival; na izany aza, andraikitry ny vahiny ny fandaniana rehetra mifandraika amin'izany.
SARY SY FISAORANA FIZARANA
Manentana mafy ny vahiny rehetra izahay mba hanao saron-tava rehefa ao an-trano, indrindra ireo vahiny tsy vita volo, ao anatin'izany ny ankizy latsaky ny 12 taona izay tokony hisaron-tava amin'ny toerana ampahibemaso, afa-tsy rehefa misakafo na misotro. Ny vahiny rehetra 2 taona no ho miakatra dia takiana mba hisaron-tava amin'ny ascenseur sy any amin'ny faritra fialamboly anatiny, fivarotana antsinjarany rehetra, ary amin'ny trano filokana, afa-tsy rehefa misakafo na misotro. Ny vahiny dia takiana mba hisaron-tava alohan'ny hipetrahana ao amin'ny efitrano fisakafoananay lehibe sy ao amin'ny faritra Lido Buffet ary indraindray any amin'ny faritra voatondro hafa izay hipetrahan'ny vahiny marobe (hametrahana sora-baventy). Ho fanampin'izany, takiana saron-tava amin'ny faritra mihidy amin'ny sambo toy ny spa, salon, ary amin'ny hetsika atao an-trano miaraka amin'ny ankizy latsaky ny 12 taona (izany hoe Build-A-Bear®, Family Harbor ary Sky Zone®).
Ny vahiny rehetra dia tsy maintsy manao saron-tava mandritra ny fizotran'ny sambo sy ny debarkation iray manontolo (eo amin'ny seranan-tsambo sy seranan-tsambo misy an'izany, ary ao anatin'izany ny fizotry ny fizarana mialoha), mandritra ny fitsangatsanganana eny amoron-dranomasina izay neken'ny Carnival ary na eo amin'ny fiara fitaterana rehetra aza, anisan'izany ny lakandrano. Ankoatr'izay, rehefa miakatra am-piavy dia tokony ho vonona ny vahiny hanaraka ny torolàlana rehetra eto an-toerana momba ny sarontava sy ny halaviran'ny vatana. Ny satan'ny torolàlana eo an-toerana dia zaraina amin'ny vahiny alohan'ny fisoratana anarana any amin'ny toerana haleha.
NAOTY: Ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana any Alaska izay nanara-maso ny zava-nisy tany am-pitan-dranomasina dia nanoro hevitra mafy fa ny vahiny rehetra, ao anatin'izany ireo vita vaksiny tanteraka, dia manaova sarontava amin'ny tarehy mandritra ny fotoana rehetra ao an-trano sy any ivelany koa rehefa tsy azo tazonina ny fahasarotana. Ny fitsipiky ny Etazonia dia mitaky ny olona rehetra hisaron-tava amin'ny fitateram-bahoaka ao anatin'izany ny fiara fitateram-bahoaka, fiarandalamby, van, seranam-piaramanidina, fiaramanidina ary sambo fitsangantsanganana antoandro.
Ny vahiny vaksiny dia tsy voatery mitazona ny halaviran'ny vatany eo ambonin'ny sambo.
Soso-kevitra ny hisian'ny elanelam-be vaksina hitazomana ny halaviran'ny vatana toy izao:
Ao anaty - Mijanona farafahakeliny 6 metatra miala ny hafa fa tsy ao anatin'ny vondrona mpiara-dia aminao. Araka izany, mamporisika anao izahay handray ny tohatra arak'izay azo atao, raha hainao ny manao izany.
Any ivelany - Mijanona farafahakeliny 3 metatra miala ny hafa rehefa tsy manao sarontava ary tsy ao amin'ny vondrona mpiara-dia aminao.
PROGRAMY TANORA & SKY ZONE®
Camp Ocean ™: Tsy hotolorana amin'izao fotoana izao ny programa ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona ao amin'ny Camp Ocean.
Circle “C” ® & CLUB O2®: Ny tanora sy ny tanora tsy vita volo dia tsy avela handray anjara amin'ny programa tanora Circle “C” sy CLUB O2 no manara-maso, na miditra amin'ny Sky Zone® raha mitsangatsangana amin'ny Carnival Panorama®.
CASINO - 8 SEPTEMBER nohavaozina
Ho fampiroboroboana ny fiarovana, ny halavirana ara-batana ary ny fahasalamam-bahoaka, dia nohavaozinay ireo fiakaran'ny casino an-tsambo, ny sabotsy 11 septambra lasa teo.
Ny Casinos dia natao ho an'ny mpilalao mavitrika sy ny namany irery ihany; tsy misy fivoriana any amin'ny casino raha tsy izany.
Ny seza eo amin'ny latabatra sy ny lalao dia natokana ho an'ny mpilalao ihany.
Tsy misy fifohana sigara ao amin'ny casino raha tsy mipetraka sy milalao ianao.
Tsy avela ao anaty casino ny fifohana sigara rehefa mihidy.
Ny vahiny dia antenaina hitafy facemask raha tsy mifoka na misotro zava-pisotro misy azy ireo.
Mihidy ny trano fisotroana casino; ny zava-pisotro dia hatolotry ny mpiasan'ny bar anay ho an'ny mpilalao kasino.
Mankasitraka ny fanohanan'ny vahininay ireo kaonty napetraka ireo ho amin'ny tombotsoan'ny tsirairay.
FIAINANA AVY AMIN'NY morontsiraka
Ireo vahiny vaksiny dia afaka mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana ataon'ny Karnavaly sy ny fitsangatsanganana tsy miankina. Ny vahiny tsy vita volo dia tsy afaka miakatra irery any amin'ny seranan-tsambo. Ny mpitsidika dia tsy afaka miantso afa-tsy amin'ny seranan-tsambo antso raha toa ka voatondrona amin'ny fitsangatsanganana feon-kiraro notohanan'ny Karnavaly. Na izany aza, raha mitsidika seranan-tsambo fiantsoana manokana toy ny Half Moon Cay sy Princess Cays ny fitsangantsanganana ataon'izy ireo dia mety hidina irery any an-tanety na hividy ny fitsidihantsika rehetra ireo vahiny tsy voatanisa.
Ilaina ny fanarahana ny protokolan'ny fahasalamana isaky ny seranan-tsambo tsidihinay, izay fehezin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana ary azo ovaina tsy misy fampandrenesana mialoha. Ireo vahiny dia tokony ho tonga vonona hanaraka ny torolàlana eo an-toerana momba ny fanaovana sarontava, ny fanalavirana ara-batana, ny fizahana fizahana fizahana / fahasalamana, sns.
NAOTY: Mitohy mivoatra ny fepetra takiana amin'ny toerana misy antsika ary mifototra amin'ny fifanarahana seranan-tsambo ataontsika miaraka amin'i San Juan, ireo vahiny tsy voamarina dia tsy maintsy mijanona ao mandritra izany antso izany.
Tontolo iainana mahasalama
Azafady mba ampio izahay hitazona tontolo iainana mahasalama amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fitoeran-tànana fanasana tanana sy ireo mpanadio mpanadio tanana amin'ny vavahady fidirana sy amin'ireo faritra be mpandeha manerana ny sambo. Ilaintsika koa ny vahiny hanaraka ny torolalantsika momba ny fomba hijanonana ho salama an-tsambo ary rehefa eny am-pitan-dranomasina, amin'ny alàlan'ny fandaharana isan'andro, rafitra fialamboly, fanambarana, literatiora ao amin'ny stateroom, ary ny Carnival HUB App.
Fandraisana an-tsoratra ONLINE
Noho ny fizotry ny fidirana an-tsambo vaovao, ny mpitsidika rehetra dia mila mameno ny Internet Check-In ary misafidy fanendrena fahatongavana. Ny Check-In an-tserasera dia misy ho an'ny vahiny Suite, Platinum ary Diamond mandritra ny 16 andro alohan'ny sambo; ny fidirana ankapobeny dia manomboka amin'ny 14 andro alohan'ny sambo. Zava-dehibe ny fahatongavan'ireo vahiny amin'ny fotoana ilana azy satria tsy azo noraisina ny fahatongavan'ireo vao tonga ary asaina miverina amin'ny fotoana nanendrena azy izy ireo. Miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ny tsirairay, afaka miara-miasa izahay hiantoka ny fiaingana ara-potoana sy ny fiantombohan'ny vakansy!
Drafitra KARNIVALY HANASA NY SABOTSIKA MANARAKA AMIN'NY 31 DESAMBRA 2021 EO AMIN'NY TENIN'NY CRUISE VACCINATED:
Carnival Vista® avy any Galveston
Carnival Horizon® avy any Miami
Carnival Breeze® avy any Galveston
Carnival Miracle® avy any Seattle
Mardi Gras ™ ️ avy any Port Canaveral
Carnival Magic® avy any Port Canaveral
Carnival Sunrise® avy any Miami
Carnival Panorama® avy any Long Beach
Carnival Pride® avy any Baltimore; Sailings manomboka ny 12 septambra 2021
Carnival Dream® avy any Galveston; Sailings manomboka ny 19 septambra 2021
Carnival Glory® avy any New Orleans; Sailings manomboka ny 19 septambra 2021
Carnival Miracle® avy any Long Beach; Sailings manomboka ny 27 septambra 2021
Carnival Freedom® avy any Miami; Saringings manomboka amin'ny 9 Oktobra 2021
Carnival Elation® avy any Port Canaveral; Sailings manomboka ny 11 Oktobra 2021
Carnival Valor® avy any New Orleans; Saringings manomboka amin'ny 1 Novambra 2021
Carnival Legend® avy any Baltimore; Sailings manomboka ny 14 Novambra 2021
Carnival Pride® avy any Tampa; Sailings manomboka ny 14 Novambra 2021
Carnival Conquest® avy any Miami; Sailings manomboka ny 13 Desambra 2021
Carnival Radiance® avy any Long Beach; Sailings manomboka ny 13 Desambra 2021